Fulintu waa ka muhiimsan tahay oraahda (Practice is more important than theoretical) Qore: Suldaan Gar Yare. – Shabakadda Amiirnuur
Fulintu waa ka muhiimsan tahay oraahda (Practice is more important than theoretical) Qore: Suldaan Gar Yare.
January 9, 2019 6:51 am by admin Views: 75
Waxa aan dhegeystay hadalladii ay soo jeedinaayeen musharrixiinta u tartamaysa madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ee maamul goboleedka Puntland. Dhammaan musharrixiintu waxa ay ku dhawaaqayeen codod macaam (political rhetoric), balse u baahan fulin dhab ah, mana aha wax ku cusub qof kasta oo u tartamaya hannaanka siyaadeed ee dal ama maamul gobol.
Su’aasha isweydiinta mudan ayaa ah hadalladaa macamacaani ma yihiin kuwo ay fulin karaan ragga aad ugu dheeraaday soo jiidashada iyo beerlaxawsiga ay ka dalbanayaan cidda iyaga codka siinaysa, mise waa sheekadii iyo maaweeladii horey looga bartay (political legend) siyaasiinta Soomaalida.
Waxa aan hubaa in ay codka u kala helayaan sida ay u kala liitaan waayo nin wax wanaagsan qabanaya ama wanaag raba xilliggana dadka maankooda kuma jiro oo xaddiiskii Rasuulka (csw) ayaa muuqda oo ahaa “dadka waxaa u imaan doona sannado dhib badan, oo kii tuugga ahaa la aaminayo, beenlowgiina la rumaynayo” taasina waa midda hadda ka muuqata dunida muslimka. Kolley arki doonee aniga nin walba hadalkiisu summad ayuu ii leeyahay waana taariikh qormaysa, waxa aynu dhawrnaaba waa berri iyo wixii dhaca inshaa allaah: